Mid ka mid ah diyaaradaha 777 ayaa rakibaya sax
Su'aal Mid ka mid ah diyaaradaha 777 ayaa rakibaya sax
1 sano 4 bilood ka hor #802 by jopidioot
Ma suurtogal in la tilmaamo sida wax loo qabanayo markaad xajisid 777 ee P3Dv4. Midkoodna ma shaqeynayo. Wax horudhac ah lama hayo. Waxay muujiyaan (ao) iyada oo aan ka soo degin qalab.
1 sano 4 bilood ka hor #803 by rikoooo
Ilaa hadda sida Boeing 777s kuma habboona udiyaarin Prepar3D v4, sababtoo ah P3D v4 waa codsi 64 oo codsi kasta oo lagu daro FS2004 waa 32 oo keliya oo ku habboon.
Haddii aysan qorayaashu cusbooneysiinin moodeeliyahooda ma jiraan wax aan sameyn karno marka laga reebo sugitaanka.